Budada biyaha ku milma
Daawada Dhaqanka Shiinaha
Xal ku shub
Bishii Juun 20-22 Kooxda Jizhong waxay kaqeybgaleen VIV Europe 2018 magaalada Utrecht, Netherlands
Bishii Luulyo 20, 2016
Intii lagu guda jiray Nofeembar 3, 2017 illaa Noofambar 8, 2017, kormeerayaasha ka socda Guddiga Qaranka ee Dawooyinka & Sunta (NMPB)
Meey 18-20, 2021 Nanchang Animal Expo, Jizhong Pharmaceutical ayaa kugu martiqaadeysa inaad wadaagto
19 (2021) Carwada Shiinaha ee Xanaanada Xoolaha waxaa lagu qabanayaa Nanchang Greenland International Expo Center laga bilaabo 18-ka May ilaa 20-keeda. Baoding Jizhong Pharmaceutical Co., Ltd. waxay kuu soo direysaa martiqaad daacad ah! Munaasabada dhacdadan xanaanada xoolaha, daawada Jizhong ayaa ku tusi doonta soo jiidashada ...
Shuanghuanglian Xalka Afka Ka-hortagga Tallaalka Cadaadiska Cadaadiska
Tallaalka asalka inta lagu gudajiro xilliga jiifku wuxuu keenaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka ukunta. (10,000 oo digaag jiif ah) Tallaalka, laba-cirib-tirka (tallaalka, qabashada digaagga), hoos u dhaca soo-saarka ugxantu way adag tahay in lagu laabto meeshii hore. Xalka afka Shuanghuanglian: Qiyaasta: 7 dhalo maalintii, onc ...
BAODING JIZHONG FARMACEUTICAL CO., LTD waxaa la gudoonsiiyay shirkad ku dayasho mudan oo daryeel ganacsi ka sameysa gobolka Hebei ee xanaanada xoolaha iyo cilmiga xoolaha iyo hal-abuurka teknolojiyadda.
Laga soo bilaabo Oktoobar 26th ilaa 27th, 2020, Shirka 7aad ee Xanaanada Xoolaha iyo Xannaanada Xoolaha ee Sayniska iyo Horumarinta Teknolojiyada oo hal-ku-dhigga ah "dejinta wax-soo-saarka, dib-u-nooleynta warshadaha caanaha, taranka sayniska, iyo ilaalinta deegaanka ee deegaanka" ayaa lagu qabtay Shijiazhuan ...
Sababta Falanqaynta iyo Ka Hortagga iyo Xakamaynta Cudurka Beerka Digaagga
1. Astaamaha iyo muhiimada beerka Astaamaha lagu garto beerka digaaga 1. Beerka digaaga waa xubin aad ugu weyn xubnaha, qiyaastiina waa 2% jirka. 2. Beerku wuxuu ku yaalaa qaybta hoose ee digaagga caloosha caloosha, oo leh bidix iyo bidix midig, r ...
Jizhong Farmashiyaha muuqaalka wanaagsan ee Shirka doofaarka Liman
Xilligan qaan gaarnimada, Shirka 9aad ee Liman Shiinaha Doofaarka iyo 2020 World Pig Expo waxaa lagu qabtaa Chongqing, oo ah magaalo ay ka buuxaan buuro iyo wabiyaal. In kasta oo saameynta cudurku faafayo, haddana baaxadda Shirka ayaa si aad ah u kordhay, iyada oo xubnaha 8264 ay yihiin gener ...
Sebtember 4-6, 18-ka (2020) CAHE, Jizhong ayaa imanaya
Sababtoo ah COVID-19, 18 (2020) Bandhigga Xannaanada Xoolaha ee Shiinaha ayaa dib loogu dhigay Sebtember 4-6. Ka dib xagaagii kulul, jawiga horraantii dayrta ayaa xitaa ka roonaaday. Kulaylka Changsha weli ma uusan hoos u dhicin bisha Sebtember, dadka xiisaha leh ee reer Jizhong ayaa kugula kulmi doona Changsha Inter ...
Bishii Juun 20-22 Kooxda Jizhong waxay kaqeybgaleen VIV Europe 2018 magaalada Utrecht, Netherlands. Iyadoo bartilmaameed u ah booqdayaasha 25,000 iyo shirkadaha soo bandhigaya 600, VIV Europe waa dhacdada ugu sareysa tayada ee warshadaha caafimaadka xoolaha ee adduunka. Isla mar ahaantaana, xubnaheenna kale ee kooxda ayaa ka qaybgalay CPhI China 20 ...
Intii lagu guda jiray Nofeembar 3, 2017 illaa Noofambar 8, 2017, kormeerayaasha ka socda Guddiga Qaranka ee Dawooyinka & Sunta (NMPB), Suudaan, ayaa baaritaan ku sameeyay GMP ee Baoding Sunlight Herb Medicament Co., Ltd, oo ah mid ka mid ah warshadaha wax soo saarka ee Baoding Jizhong Pharmaceutical Group. Iyada oo dadaalka wershadda oo dhan, ...
Bishii Luulyo 20, 2016, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Yu Kangzhen iyo Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee Xafiiska Xannaanada Xoolaha Xiang Chaoyang ayaa booqday xaruntayada cusub ee wax soo saarka ee Qingyuan, magaalada Baoding. Wasiir kuxigeenka Yu wuxuu tilmaamay in ka mid ah soo saarayaasha xoolaha ee ugu weyn, Jizhong Pharmaceut ...
Meey 18-20, 2021 Nanchang Animal Expo, Jiz ...
Xalka Afka Shuanghuanglian ee Kahortagga Tallaalka ...